Milisy Sivily Nofanin’i Rosia “Vonona Hiady Amin’ireo Mpitsoaponenana” Any Amin’ny Sisintany Iraisany Amin’i Bolgaria · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Aogositra 2016 18:21 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Français, عربي, Ελληνικά, English
Hitan'ny fanadihadiana iray nataon'ny fahitalavi-panjakana Alemàna ZDF nalefa ny 8 Jona fa efa niasa ambany faneva tao amin'ny tafika Bolgara ny farafahakeliny antsasak'ireo lehilahy ireo. Manao sarontava sy fanamiana miaramila izy ireo, ary mitondra antsy ny ankamaroany. Ny sasany anefa, manana basy mihitsy.
Vokatry ny valiny tsy mifanaraka amin'ny olana nataon'ireo manampahefana sy ny governemantan'i Plamen Oresharski, ireny milisy sivily mpanao fisafoana ireny. Voalohany, nipoitra tany Sofia renivohitra izy ireo, ary hatramin'ny 2015 dia misy milisy maro mpanao fisafoana any amin'ny sisintany Bolgara-Tiorka, izay nivoatra ho fikambanana milisy tsy miankina noho ny zava-misy.
Tamin'ny voalohany, tsy nitondra fitaovam-piadiana miharihary ireo “milisy mpisafo” ireo. Lasa nalaza kokoa izy ireo ary natao toy ny miaramila kokoa niaraka tamin'ny fametrahana ivontoerana maro ho an'ireo mpitsoaponenana tao ary nanodidiana an'i Sofia. Tafiditra amin'izany ny ivontoerana fototra any Ovcha Kupel, Voenna Rampa ary Vrazhdebna, izay tantanan'ny Masoivohom-panjakana Bolgara misahana ny Mpitsoaponenana. Maro tsy voaisa ihany koa ireo mpifindra monina mipetraka amin'ireo trano any amin'ireo faritra afovoan'ny renivohitra.
Naharay ireo antontan-taratasy maha mponina sy fahazoandàlana hitoetra, ho azy sy ny fianakaviany, ireo mpifindra monina, fa misy fikambanana Nasiônalista any Bolgaria nanomboka naka tombony amin'ny resaka ara-politika tamin'ny fitomboan'ireo mpitsoaponenana eo an-toerana ary mba hampitombo ny fahitàna azy ireo eo anivon'ireo olompirenena Bolgara. Boyan Rasate, ohatra, ilay filohan'ny Vondrona Nasiônaly Bolgara – Demôkrasia Vaovao (BNU-ND), antoko politika Nasiônalista Sôsialista mitoetra ao Sofia, mitantana ny iray amin'ireo milisy sivily ireo, milaza fa manao izany izy mba ho “tia tanindrazana sy hiaro ireo soatoavina Bolgara”.
Ny 9 Novambra 2013, lehilahy Bolgara 28 taona teraka avy any Tiorka no nisy nidaroka taorian'ny fiheverana diso natao azy ho mpifindra monina. Nahitàna fanaovana herisetra tamin'ny tovolahy Maliana 18 taona sy teratany Siriana 17 taona, ireo fanafihana tsy fitiavana vahiny hafa, tao anelanelan'ny volana Novambra sy Desambra 2013.
Ny faran'ny taona 2013, naneho ny ahiahiny tamin'ny fitomboan'ny heloka noho ny fankahalàna vahiny atao amin'ireo mpifindra monina any Bolgaria, ary ireo hetsika manohitra ny mpifindra monina nanomboka nokarakarain'ireo vondrona ilany havanana indrindra, ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona Amnesty International. Notaterina tamin'ny fanambaràn'ny Amnesty ny 12 Novambra 2013, nilaza izao ny mpitondrateny Barbora Cernusakova “Misy fitomboana mampiahiahy sy mety hitera-doza amin'ny fihetsehampo tsy tia vahiny any Bolgaria ary andraikitr'ireo manampahefana ny misoroka izany, saingy mety vao mainka hanaratsy ny toe-draharaha ireo fanambaràna vao haingana nataon'ny governemanta.”
Araka ny angon-drakitry ny polisy bolgara, olona miisa 1.500 no voasakana isam-bolana amin'ny fiampitàna ireo sisintany avy any Torkia sy Gresy. Tao anelanelan'ny faran'ny volana May sy ny fiandohan'ny volana Jona 2016, maro ireo tatitra niseho mikasika ireo vondron'olona izay nahavita niampita avy any Gresy nankany Bolgaria. Nitatitra ny masoivohom-baovao Novinite hoe mpifindramonina 53 no nalefan'ireo manampahefana Bolgara niverina avy hatrany tany Gresy. Nisy vondron'olona niisa 34 hafa indray tratra tany anaty fiarandalamby mpitatitra entana teny amin'ny làlana avy any Gresy hankany Bolgaria. Nilaza ny tatitra hafa iray an'ny Novinite hoe indray andro, tao anatin'ny 24 ora, nisy mpifindramonina hafa niisa 215 voasakana teo am-pidirana tao Bolgaria: 62 nanandrana ny hiampita ny sisintany anelanelan'i Gresy sy Bolgaria tao Novo Selo, 155 nanandrana niditra avy tamin'ny sisintany miaraka amin'i Torkia. Vokatr'ireo tranga ireo, nanaparitaka andianà miaramila ireo manampahefana Bolgara, natao teny amin'ny sisintany miaraka amin'i Gresy.
Satria nanomboka nateti-piavy ireo vaovao mikasika ireo mpitsoaponenana, nanomboka nipoitra tany amin'ny sisintany miaraka amin'i Torkia ny “milisy sivily”. Raha araka ny lalàna, tsy manan-jo hanao fisamborana izy ireo, kanefa manao izany ihany izy ireo na izany aza. Notaterina, hatreto, fa “nahasambotra” teratany Afghana maro ireo milisy mpisafo, ary ny volana Febroary 2016, nankalazain'ny media Bolgara ho “mahery fo” i Dinko Valev, 29 taona, avy ao amin'ny tanàna kely, Yambol, noho ny nahasamborany vondrona mpitsoaponenana Siriana “tamin'ireo tanam-polony.” Nanao be lazao tao amin'ny fahitalavi-panjakana i Valev tamin'ny fisafoany ny sisintany Tiorka mba “hihazàna” ireo mpifindra monina, ary hatreo dia nanomboka nanangana ny vondrony manokana.
Raha nahatonga resabe tany Bolgaria ny asan'ireo “mpisafo”, mijanona mangina kosa ireo manampahefana sy governemanta tantanan'ny antoko politika afovoany-havanana GERB sy ny Praiminisitra Boyko Borissov. Amin'ny ankapobeny, mbola mangiana ihany koa ny media Bolgara. Milaza ny fisian'ireo “milisy sivily” any Sofia ireo tati-baovao, fa tsy ireo manaraka ny sisintany miaraka amin'i Torkia. Ny iray amin'ireo fihetsika vitsy taorian'ny tatitry ny ZDF dia avy tamin'ny vohikalam-vaovao Mediapool, izay namintina ny votoatin'ny tatitra sy nanao adihevitra ny amin'ny fivoaran'ireo milisy ireo, teo ambany lohateny vaventy hoe “Mpihaza mpitsoaponenana nahazo fiofanana Rosiana any Bolgaria”. Avy tamin'ny vohikalam-baovao Actualno.com, ny tamberim-pihetsehampo hafa iray, izay niompana tamin'ny fiofanana nomen'i Rosia ihany koa. Niresaka ireo olona ho tsy hoe mpitsoaponenana fa “mpanani-bohitra an-keriny” ny media mpomba an'i Rosia toy ny Budna era.
Ilay sampana nasiônalista mpitarika izay nampiasa ireo mpisafo ireo teny amin'ny sisintany miaraka amin'ny Torkia dia ny Voenen sayuz – BNO Shipka (“sendika miaramila – BNO Shipka”). Mitazona pejy Facebook sy vondrona Facebook izy ireo, izay samy manana mpikambana maherin'ny 4.000 ankehitriny. Ao amin'ireo sehatra ireo, resahan'izy ireo ao ireo hetsika anoherana ireo mpitsoaponenana sy ireo mpifindra monina. Ny 6 Jiona, nanao lahatsary mikasika ireo hetsika ny fantsona rosiana iray.